Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Luke 21
Nepali New Revised Version, Luke 21
1 उहाँले हेर्नुहुँदा धनीहरूलाई आफ्‍नो-आफ्‍नो भेटी मन्‍दिरको दानपात्रमा राखेका देख्‍नुभयो।
2 उहाँले एउटी गरीब विधवालाई त्‍यहाँ दुई पैसा चढ़ाएकी पनि देख्‍नुभयो।
3 तब उहाँले भन्‍नुभयो,  “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, यस गरीब विधवाले अरू सबैले भन्‍दा बढ़ी चढ़ाएकी छे।
4  किनकि यिनीहरू सबैले आफ्‍ना प्रशस्‍तताबाट भेटी चढ़ाएका छन्‌, तर यसले चाहिँ आफ्‍नो दरिद्रताबाट आफ्‍नो सारा जीविका नै दिई।”
5 अब कोही-कोहीले सुन्‍दर-सुन्‍दर ढुङ्गाहरू र दानमा प्राप्‍त भएका सामग्रीहरूले सुसज्‍जित पारिएका मन्‍दिरको विषयमा कुरा गर्न लागे। येशूले भन्‍नुभयो,
6  “तिमीहरूले जे देखिरहेका छौ, यस्‍तो समय आउनेछ जब एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहनेछैन, ती जम्‍मै भत्‍किनेछन्‌।”
7 तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, “गुरुज्‍यू, यी सब कहिले हुनेछन्‌? र यो कुरा हुन लाग्‍दा के चिन्‍ह हुनेछ?”
8 उहाँले भन्‍नुभयो,  “होशियार रहो, तिमीहरूलाई कसैले नबहकाओस्‌। मेरो नाउँमा धेरै जना ‘म उही नै हुँ’ र ‘बेला नजिक आएको छ,’ भनेर भन्‍छन्‌। तिनीहरूका पछि तिमीहरू नलाग।
9  तिमीहरूले जब युद्धहरू र खैलाबैलाका कुराहरू सुन्‍नेछौ तब भयभीत नहोओ, किनभने पहिले यी घटनाहरू हुनैपर्छ, तर अन्‍त्‍यचाहिँ तुरुन्‍तै हुनेछैन।”
10 तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “राष्‍ट्र, राष्‍ट्रका विरुद्धमा, र राज्‍य, राज्‍यको विरुद्धमा उठ्‌नेछ।
11  भयङ्कर भूकम्‍पहरू हुनेछन्‌। विभिन्‍न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्‌, भयङ्कर आतङ्क हुनेछन्‌, अनि आकाशबाट ठूला-ठूला चिन्‍हहरू हुनेछन्‌।
12  “तर यी सबै कुराहरू हुन अघि, मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्रनेछन्‌, र सताउनेछन्‌, र तिमीहरूलाई सभाघरहरूमा सुम्‍पिदिनेछन्‌, र झ्‍यालखानमा हालिदिनेछन्‌। तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर राजाहरू र हाकिमहरूका सामुन्‍ने पुर्‍याउनेछन्‌।
13  तर तिमीहरूका लागि यो एउटा गवाही दिने अवसर हुनेछ।
14  यसकारण आफ्‍नो बचाउको निम्‍ति के भन्‍ने हो सो अघिबाट सोच्‍नेछैनौं भनी आफ्‍ना मनमा पक्‍का गर।
15  किनभने म तिमीहरूलाई यस्‍तो बोल्‍ने मुख र बुद्धि दिनेछु, कि तिमीहरूका विरोधीहरूले प्रत्‍युत्तर दिन सक्‍नेछैनन्‌, अनि खण्‍डन गर्न पनि सक्‍नेछैनन्‌।
16  तर तिमीहरूका आमा-बुबा र दाजुभाइहरू, नातेदारहरू र मित्रहरूले पनि तिमीहरूलाई पक्राइदिनेछन्‌, र तिमीहरूमध्‍ये कोही-कोहीलाई तिनीहरूले मार्नेछन्‌।
17  मेरो नाउँको खातिर तिमीहरूलाई सबै मानिसहरूले घृणा गर्नेछन्‌।
18  तर तिमीहरूका शिरको एउटा केश पनि नष्‍ट हुनेछैन।
19  तिमीहरूको धैर्यद्वारा तिमीहरूले आफ्‍नो प्राण प्राप्‍त गर्नेछौ।
20  “तर जब यरूशलेमलाई सेनाहरूले घेरेका देख्‍छौ, तब त्‍यसको विनाश नजिकै आइपुगेको छ भन्‍ने जान।
21  तब यहूदियामा हुनेहरू पहाड़हरूतिर भागून्‌। सहरभित्र हुनेहरू बाहिर भागिजाऊन्‌, र बाहिर गाउँमा हुनेहरू सहरभित्र नपसून्‌।
22  किनभने लेखिएका कुराहरू सबै पूरा हुनलाई यी प्रतिशोधका दिन हुनेछन्‌।
23  ती दिनमा गर्भवती र दूध खुवाउने स्‍त्रीहरूका निम्‍ति हाय! किनकि पृथ्‍वीमा ठूलो सङ्कष्‍ट आउनेछ, र यस जातिमाथि क्रोध आइपर्नेछ।
24  तिनीहरू तरवारले मारिनेछन्‌, र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन्‌। अनि अन्‍यजातिहरूको समय पूरा नभएसम्‍म तिनीहरूले यरूशलेमलाई खुट्टामुनि कुल्‍चेर राख्‍नेछन्‌।
25  “सूर्य, चन्‍द्र र ताराहरूमा चिन्‍ह देखा पर्नेछन्‌, र समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्‍वीका राष्‍ट्रहरू सङ्कष्‍टमा परी व्‍याकुल हुनेछन्‌।
26  संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशङ्काले मानिसहरू मूर्च्‍छा पर्नेछन्‌, किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्‌।
27  त्‍यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महा महिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्‍नेछन्‌।
28  जब यी कुरा हुन थाल्‍छन्‌ तब खड़ा होओ र आफ्‍नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ।”
29 उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्‍टान्‍त भन्‍नुभयो:  “अञ्‍जीरको रूख र सबै रूखहरूलाई हेर,
30  तिनले पालुवा फेरेको देखेर तिमीहरू आफै थाहा पाउँछौ, कि ग्रीष्‍म ऋतु नजिकै छ।
31  त्‍यसै गरी तिमीहरू पनि जब यी कुरा भइरहेका देख्‍छौ, तब परमेश्‍वरको राज्‍य नजिकै छ भनी जान।
32  “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, यी सबै घटना पूरा नभएसम्‍म यो पुस्‍ता बितिजानेछैन।
33  आकाश र पृथ्‍वी बितिजानेछन्‌, तर मेरा वचन बित्‍नेछैनन्‌।
34  “तर तिमीहरू आफ्‍नो विषयमा होशियार रहो, नत्रता भोग-विलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला, र तिमीहरूमाथि एक्‍कासि त्‍यो दिन पासोझैँ आइपर्ला।
35  किनकि यसरी नै सारा पृथ्‍वीमा वास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्नेछ।
36  तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्‍कन र मानिसको पुत्रको सामुन्‍ने खड़ा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो।”
37 येशूले दिउँसो मन्‍दिरमा शिक्षा दिनुहुन्‍थ्‍यो, र रातीचाहिँ निस्‍केर जैतून भनिने डाँड़ामा रात बिताउनुहुन्‍थ्‍यो।
38 उहाँको वचन सुन्‍नलाई सबै मानिसहरू बिहानै मन्‍दिरमा आउँथे।
Luke 20 Choose Book & Chapter Luke 22